အမျိုးသားများအတွက် sideburns အမျိုးအစားများ | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 12/06/2022 10:40 | ရိတ်လိုက်ပြီ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ပုံ, ဆံပင်ပုံစံ, သဘောထားတွေ
မည်သည့်ဆံပင်ပုံစံကိုမဆို ၀တ်ဆင်ရန် လုံးဝလွတ်လပ်သောခေတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ပါသည်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဆံပင်ပုံစံတွေက ဖက်ရှင်တွေကို ဘေးဖယ်မထားဘဲ ဒါကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါတယ်။ မြှေးကို ဘယ်လို ဦးစားပေးရမလဲ. အမျိုးသားများအတွက် sideburns အမျိုးအစားများပေါ်တွင်အဓိကအားဖြင့်မူတည်လိမ့်မည်။ သမိုင်းမှာ ဘယ်လို ထွန်းကားခဲ့လဲ။ အဓိကအားဖြင့် လူ၏အရွယ်အစား။
ဘေး သမိုင်းတလျှောက် သူတို့ပေးခဲ့တာ လူနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များစွာရှိသည်။ ဘယ်သူဝတ်ခဲ့လဲ။ ဤနည်းဖြင့် ဆံပင်ပုံစံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ပြုလုပ်ပါ။ လူမှုရေးခွဲခြားမှုတစ်မျိုးမျိုး စီးပွားရေး သို့မဟုတ် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပင် ဖြစ်သည်။
Sideburns သည် မေ့ပျောက်၍မရပါ။ အမျိုးသားဆံပင်ညှပ်ခြင်း၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်း။ ယနေ့ခေတ်တွင် ပင်၏အချောသတ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိရမည့် အကြိုက်များ ပိုများလာပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဤဧရိယာကိုသတိပြုသင့်သည်။ ဆံထုံးအတွက် သော့ချက်တစ်ခုပါ၊ ဤနည်းအားဖြင့် သင်၏ဖြတ်ခြင်းကို အလွန်နှစ်သက်စေလိမ့်မည်။
2 အကျယ်အားဖြင့် ဘေးထွက်ပေါက်များ
Sideburns များသည် ဆံပင်၏ ဧရိယာများ ဖြစ်ကြသည် ဦးခေါင်း၏ဘေးနှစ်ဖက်တွင်တည်ရှိသည်။ မုတ်ဆိတ်မွေးနဲ့ ဦးခေါင်းထိပ်ကို ချိတ်ပါ။ ၎င်း၏အရှည်နှင့်သိပ်သည်းဆ ဆံပင်ညှပ်ဆရာရဲ့ ပြီးမြောက်မှုပေါ် မူတည်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် အထူးကျွမ်းကျင်သူနှင့် ထိုမျက်နှာအတွက် သီးခြားပုံတစ်ပုံကို ပြန်လည်ဖန်တီးရန် ဆံပင်ပုံစံကို ပေးအပ်မည့် နောက်ဆုံးအချောထည်သည် မည်သည့်နေရာတွင် ဖြစ်မည်နည်း။
ဤ အမြှေးပါးများသည် ကျယ်သည် သို့မဟုတ် အလွန်ကျယ်သည်။၎င်းတို့သည် ပြောင်မြောက်လွန်းပြီး မျက်နှာ၏ ဘေးနှစ်ဖက်တွင် နေရာကျယ်စေသည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းသည် ဖန်တီးထားသော pin အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ရဲရင့်သောယောက်ျားများအတွက် ထို့ကြောင့် အမြဲဆောင်ထားရမည်။ စီစဉ်ပြီး သန့်စင်သည်။
မင်းရှိနိုင်တယ်။ သဘာဝအကျယ်၊ ၎င်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ အလွန်အမင်းလွန်ကဲခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် အဆုံးတွင်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုရိုးရှင်းသောအသွင်အပြင်ကိုဖန်တီးပါ။, ဒါပေမယ့် fixed ။ ဆံပင်ညှပ်ခြင်းများသည် ကြွေကျခြင်းများစွာရှိပြီး များသောအားဖြင့် ဤအမြှေးပါးပုံစံဖြင့် လိုက်ပါသွားကြသည်။
အခြား ကျယ်ဝန်းသော ဘုရားကျောင်း အမျိုးအစားမှာ အသွင်အပြင် ဖြစ်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခု ပုံပန်းသဏ္ဍာန် ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ပိုပြီး သဘာဝကျပြီး စတိုင်ကျစေပါတယ်။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းကို နဂိုအတိုင်းရှိနေစေရန်အတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ အများအားဖြင့် ပိုမိုအပ်နှံမှုလိုအပ်ပါသည်။
တောင်ထိပ်တံ။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံရှိသည်။ အောက်သို့ညွှန်ပြသည်။ ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် အလွန်ထူးခြားပြီး ကိစ္စအများအပြားတွင် ၎င်းသည် အလွန်ထင်ရှားပြီး ထင်ရှားသည်။ မင်းရဲ့လမ်းက လူတွေအတွက် အရမ်းကောင်းတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ကျယ်ပြန့်သောမျက်နှာများနှင့် ဝတ်ဆင်သူတိုင်းအတွက် ရော့ခ်ကာစတိုင်လ်ကို ဖန်တီးပါ။
rectangular. ၎င်းသည် ဂန္ထဝင်အရှိဆုံးဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ မြင်လေ့ရှိသော အရာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဖြတ်တောက်မှုသည်စတုဂံဖြစ်သည်။ ယုတ်ညံ့သော မုတ်ဆိတ်သို့ ရောက်၏။ စတိုင်ကျတဲ့ ဝတ်နည်းလေးပါ။
ရှည်ပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ အမျိုးသားများ အတွက် မျက်နှာရှည် ပြီးပြည့်စုံသောဖြတ်တောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပုံစံသည် မုတ်ဆိတ်မွေးနှင့် ပေါင်းလိုက်သောကြောင့် ကျဉ်းသွားသော်လည်း အထွတ်အထိပ်တွင် အဆုံးမရှိပေ။
L ပုံသဏ္ဍာန် ဤပုံစံသည် အလွန်ထူးခြားပြီး ခိုင်မာပြီး လွန်ကဲသော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ပေးဆောင်ရန် အားကိုးအားထားပြုသော ကျော်ကြားသူများတွင် တွင်ကျယ်စွာ တွေ့မြင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Elvis Presley တွင် ဥပမာတစ်ခုရှိသည်။ သံသယမရှိဘဲ၊ ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် ၎င်း၏ L-ပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့် အလွန်ထူးခြားပြီး ၎င်း၏ပြတ်တောက်မှုသည် မုတ်ဆိတ်မွေးနှင့် ပေါင်းစည်းမည်ဖြစ်ပြီး မုတ်ဆိတ်မွေးကိုယ်တိုင်က ဤဝိသေသအသွင်သဏ္ဍာန်ကို ဖန်တီးရန် အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။
မီးလောင်နေသောဘုရားကျောင်းများ. ၎င်းတို့သည် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော ဘုရားကျောင်းများဖြစ်ပြီး ပြင်းထန်သောကိစ္စများတွင် အသုံးပြုကြသည်။ သတ္တိရှိသူ အလွန်နည်းပါးသောကြောင့် အထူးအချိန်အခါများတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုရှိသည်။ မြို့ပြစရိုက်နှင့် အလွန်ထင်ရှားသည်။.
အမြှေးအဆင့်မှာ. ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ပုံသဏ္ဍာန်တွင် ပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီး ပုံမှန်မျက်နှာအသွင်အပြင်ကို မထိန်းသိမ်းလိုသူများအတွက် ဂန္ထဝင်အရှိဆုံး နံပြားအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဤပုံစံဖြင့် မှန်ကန်ပြေပြစ်သော အရာတစ်ခုကို ယူဆောင်သွားပါ။
အရမ်းတိုတယ်။ ဤအမြှေးပါးအမျိုးအစားနှင့်အတူ၊ ၎င်းတို့အား အလွန်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ထားရှိရန် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလွန်ရိုးရှင်းပြီး သူတို့သည် မည်သည့်ဆံပင်ပုံစံနှင့်မဆို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ ပုံမှာပြထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဂရုတစိုက်ရှိတဲ့အတွက် ဝိုင်းဝိုင်းမျက်နှာတွေမှာ သူတို့ဟာ အလွန်ချောမောကြပါတယ်။
နားအဆင့်မှာ။ ၎င်းတို့သည် ဆုံမှတ်များဖြစ်သည်။ အလယ်အလတ်အမြင့်မှာ. ၎င်းတို့သည် ကြော့ရှင်းသော ဂရုစိုက်မှုကို ပေးစွမ်းပြီး ၎င်းတို့သည် မျက်နှာအများစုတွင် ကောင်းမွန်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဂန္တဝင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ပျောက်ဆုံးနေသော သို့မဟုတ် ပြောင်းပြန်တံများ. ပင်၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ ရိတ်ခြင်းသည် ဆံပင်နှင့် တူညီသော်လည်း ဆံပင်ကို အောက်ဖြတ်နည်းဖြင့် ရိတ်သည့်ကိစ္စများတွင်သာ၊ buzz ညှပ်စတိုင်၊ အရှည်ပိုတိုသည်။ ရိတ်ထားသော မုတ်ဆိတ်မွေးနှင့် ကိုက်ညီသည့် အောက်ခြေတွင် နံနံပင်သည် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အပေါ်ဘက်သို့ မှိန်သွားကာ မသိမသာ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Pin အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်တာက ဘာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုပ်ပုံနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ သင့်တွင် အမျိုးမျိုးသော ညှပ်မော်ဒယ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် မျက်နှာတစ်ခုရှိပါက၊ ဖော်ပြထားပြီးသား အချို့ကို စမ်းသပ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အလွန် ဆံပင်ညှပ်သည်။ မြှေးကဲ့သို့ ဝိသေသလက္ခဏာအားလုံး၏အစုံဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်လိုအပ်သောညှပ်စတိုင်ကိုလွှမ်းခြုံလိမ့်မည်။ မုတ်ဆိတ်မွေးနဲ့ နံပြားတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့ အကြံပြုမယ့် သင်ခန်းစာတွေ ရှိပါတယ်။ သင့်စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » အမျိုးသားများအတွက် sideburns အမျိုးအစားများ
အမျိုးသမီးတွေက မုတ်ဆိတ်ရိတ်တဲ့ အမျိုးသားတွေကို ကြိုက်လား။